News Collection: हामीलाई सर्वोच्च अदालतको मतलव छैन: माओवादी अध्यक्ष दाहाल
हामीलाई सर्वोच्च अदालतको मतलव छैन: माओवादी अध्यक्ष दाहाल
काठमाडौं, फागुन १ (नागरिक)- माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सर्वोच्च अदालतले ६ महिनामा संविधान बनाउन दिएको आदेशको मतलव नभएको बताएका छन्। माओवादीले आयोजना गरेको जनयुद्ध दिवसलाई टुँडिखेलमा सम्बोधन गर्दै उनले भने- हामी जनताको अदालत मान्छौं, हामीलाई सर्वोच्चले के भन्छ भन्ने मतलव छैन।
२०५२ फागुन १ गतेदेखि माओवादीले सशस्त्र युद्ध सुरु गरेका थिए। त्यसकै स्मरणमा माओवादीले यो दिवस मनाइरहेका हुन्। नेताहरुले गरेका सम्वोधन :
पुष्पकमल दाहाल : जनयुद्धका बेला हामीसँग मात्र विचार थियो, वर्ग थियो। त्यसकै कारण हामी काठमाडौं आयौं र अहिले काठमाडौंको मोर्चासँग लड्दैछौं। हामी जनताको विरोधको अधिकार सुरक्षित राख्‍न पनि जनयुद्ध दिवस मनाइरहेका छौं। एकढिक्का भएर मिसन पूरा गर्न लाग्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। कम्युनिष्ट पार्टीमा सङ्घर्ष हुन्छ र यस्तै सङ्घर्षबाट मात्रै एकता सम्भव हुन्छ। जनयुद्ध हुँदा पनि त्यतिबेला पार्टीमा विचारको गम्भीर सङ्घर्ष थियो। पार्टी फुट्ला कि जस्तोसमेत थियो।
पार्टीमा रङ्ग बदल्ने हो कि भनेर बहस हुन्छ। अनि यान्त्रिक बनेर विश्व र मुलुकको परिस्थितिसँग मेल नखाने हिसावले अघि बढ्छ कि भन्ने चिन्ता लिइन्छ। त्यसैले माओवादी टुट्छ भन्ने सपना पूरा हुने छैन। हामी भिन्न धातुकै मानिस हौं। हामी फेरि विद्रोह गर्न तयार छौं। शान्ति प्रक्रिया धेरै अघि बढिसकेको छ। यो अरुका कारण नभई माओवादीकै कारण भएको हो। हामी जनताको हित हुने संविधान बनाउने नै छौं। यसलाई कसैले रोक्न सक्ने छैन।
यदि २०४७ सालकै संविधान बनाउने हो भने म भन्छु- तपाईंहरु विद्रोहका लागि तयार हुनुहोस्। हामीलाई उतै गिड्ने भनिएको थियो तर नेपाली जनताले काठमाडौं ल्याए। जनयुद्धका उपलब्धि धरापमा छन्। त्यसैले तपाईंहरु एकताबद्ध भएर नआउने हो भने शान्ति प्रक्रिया धरापमा पर्छ। तपाईं हामी एक भएसम्म हामीलाई कसैले पराजित गर्न सक्ने छैन। जनभावनाअनुसार संविधान लेख्‍न जागरुक बनौं। यसमा अवरोध आए विद्रोहको विकल्प छैन।
सर्वोच्च अदालतले ६ महिनामा संविधान लेख भन्यो। हामीलाई त्यो अदालतको मतलव छैन। हामी जनताको अदालतले भनेको मान्छौं। क्रान्तिलाई कसरी बचाएर लानुपर्छ भन्नेबाहेक म अरुको नेता हुन सक्दिन। कमरेड किरणको चिन्ता मलाई थाहा छ। क्रान्तिको बाटो घुमाउरो हुन्छ। सोझो जान्छु भन्यो भने त्यो दुर्घटनामा पर्छ। नेतृत्वले गर्ने काम सधैं लोकप्रियमात्र नहुन पनि सक्छ। अप्ठेरोमा पनि नेतृत्व गर्नेमात्र नेता हुन्छ।
माओवादी नेताहरु बदनाम होउन् भनेर अहिले विश्व लागेको छ। नेतृत्वको आलोचना गर्दा नेतृत्वको प्रतिरक्षा गर्ने काम पनि तपाईंहरुकै हो। विशाल पार्टीबाट तर्सने हैन, यसलाई अघि बढाएर मिसन पूरा गर्न लाग्ने हो।
मोहन वैद्य : जनयुद्ध थालनी गर्दा कसैले पत्याउँदैन थियो जनयुद्ध यसरी अगाडि बढाउँछ भन्ने। हाम्रो जनयुद्ध देशमा मात्र होइन विश्‍वभर चर्चा भयो। धर्म निरपक्षेता, संघीयता प्राप्त भएको छ। राजतन्त्र समाप्‍त भएको छ। नेपाल र नेपाली अझै मुक्त भएका छैनौं। जनयुद्ध सुरु गर्दा प्रतिवद्धता जाहेर गरेका थियौं - लक्ष्य पूरा नभएसम्म हतियार बिसाउँदैनौं। तर, अहिलेको थिति के छ ? हामी वार्ता प्रकृयाको बीचमा छौं। सरकार, सदन र सडकमा छौं। तर, जनतालाई केही दिन सकेका छैनौं। हामीले जनतालाई दिनुपर्ने कुरा दिन सकेका छैनौं। सरकारमा त सबै पार्टी बस्दै आएका हो। जनसत्ता नआएसम्म हाम्रो आन्दोलन जारी रहन्छ। झण्डा झुक्दैन।
हाम्रो पार्टी नेपाली सर्वहाराहरुको पार्टी हो। हामी बहस गर्छौं। अरु पार्टी फुट्यो भन्छन्। कम्युनिष्ट पार्टी भनेकै बहस र संघर्ष हुने पार्टी हो। हाम्रो पार्टीमा देश र जनताको लागि के गर्न सक्छौं भनेर बहस गर्छौं। पार्टीमा एकता भनेको विचारको एकता हुनुपर्छ। नत्र एमालेसँग एकता गरे भइगयो नि।
एकताको मूल्य र क्रान्तिको मूल्य मिल्नुपर्‍यो।
कङ्ग्रेस र एमाले माओवादी आफूजस्तो होवस् भन्ने चाहेका छन्। कङ्ग्रेसलाई मिल्ने, एमालेलाई मिल्ने, राप्रपालाई मिल्ने पार्टी बन्ने कि जनताको पार्टी बन्ने ?
माओवादी त अलिअलि बिग्रेकै हो। अलिअलि बिग्रियौं, पूरा बिग्रन दिन्नौं।
माओवादी फुट्यो भने हामी ठूलो होलाउँ भन्ने सोचेका होलान, माओवादी फुट्दैन।
अहिले स्थिति जटिल छ। दुस्मनहरुले माओवादीलाई सुधारबादी बनाउने नसके विभिन्न तरिकाले सिध्याउने नीति लिएका छन्। हामी एकवद्ध भएर रुपान्तरणसहितको एकताका लागि लाग्छौं।
'पद त्याग्न तयार छु, एकता हुनुपर्‍यो'
वर्षमान पुन : पार्टी एकता हुन पर्छ। एकतावद्ध हुन दलका नेताहरुसँग आह्वन गर्छु। क्रान्तिका बाँकी कारबाही पूरा गर्न पनि एक हुनुपर्छ। म एकताका लागि पदबाट बाहिरिनुपर्छ भने म तयार छु। १७ वर्षअघि हामी जे सोचका साथ अगाडि बढेका थियौं त्यही बाटो लिन आवश्यक छ।(पुन अहिले सरकारमा अर्थ मन्त्री छन्।)